केको गणतन्त्र...सक्रिय राजतन्त्र
पूर्वराजाले कात्तिक ६ गते फेरि राष्ट्र र जनताप्रति आफ्नो जिम्मेवारी, उत्ररदायित्व रहेको र राष्ट्र र जनतामा अहिले भइरहेको ज्यादतिका विषयमा आफू गम्भरिरहेको आशय प्रकट गर्नुभएको छ । विजया दशमी २०७७ का अवसरमा ‘प्यारा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु’लाई दिएको शुभकामना सन्दशमा यसअघि आफूले विभिन्न समयमा दिएका अन्तर्वार्ता, प्रतिक्रिया र शुभकमना सन्देशभन्दा अलिबढी कडा शब्द प्रयोग गर्नुभएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । यसपटकको सन्देशमा पहिलाको जस्तो आग्रह छैन । सन्देश बहुतै आक्रामक छ । सन्देशमा पूर्व श्री ५ ले वर्तमान समयमा नेपाली जनता अभिभावकविहीन टुहुरा बनेको पीडा बोध भइरहेको बताएर वर्तमान शासन व्यवस्था र देश हाँक्ने नेताहरुमाथि प्रहार गर्नुभएको छ ।
कोरोनाको कहर, प्राकृतिक विपत्तिदेखि लिएर जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेकोप्रति मात्र होइन कि यस्तो महामारीका समयमा पनि रोजगारीका लागि जीवन नै दाउमा राखेर विदेशीएका नेपालीहरुप्रति सरकार जिम्मेवार बन्न नसकेको बताउनु भएको छ । ‘समाजमा अनेक आपराधिक गतिविधि र पिसाच प्रवृत्ति बढ्दो छ, यसले मानसिक तनावको परिस्थिति पनि खडा गरेको छ ।अ ाज सबैले बढ्दो आसुरी र भ्ष्मासुरी प्रवृत्तिबाट जनताले उन्मुक्ति चाहिरहेका छन्’ भन्ने सन्देशमा उल्लेख गरेर पूर्वराजाले कटाक्षसमेत गर्नुभएको छ । हुन पनि नेपाली जनता अहिले अभिभावकविहीन नै भएका छन् । देश र जनताप्रति कोही जिम्मेवार देखिएनन् । संविधानको पालक भनेर चिनिएकी राष्ट्रपति पनि ओली गुटको मात्र जस्तो देखिएकी छिन् । हैसियत नै नभएका गुप्तर रअका सामन्त गोयलले सिधै प्रम ओलीसँग राति दुईघण्टा वार्ता गरे । यसको सर्वत्र बिरोध भइरहेको छ । तर ओलीका राष्ट्रपतिका कथित सञ्चारविज्ञ टीकाप्रसाद ढकाल उक्त नमिल्दो भेटघाटको बचाउ गरिरहेका छन् । प्रम अ‍ोलीकै पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरु ‘यो त अति भयो’ भन्दैछन् । तर संविधानका पालक राष्ट्रपतिका सल्लाहकार चाहिँ उक्त भेटवार्ताको उद्देश्य कालापनीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउने र नयाँ सीमा सम्झौता गर्ने रहेको भन्ने बताएर जग हँसाइ गरिरहेका छन् । जासुससँग नेपालका प्रधानमन्त्रीको घटौघण्टा गोप्य वार्ता ? एकातिर कागजी रुपमा कालापानी क्षेत्र नेपालको अधीनमा ल्याउने अर्कातिर नयाँ नक्सा समेटिएको पाठ्यपुस्तक जारी नगर्नु भन्ने अनि कलापानी क्षेत्रमा दिनहुँजसो भइरहने भारतीय सैनिक अधिकारीको भ्रमणप्रति नजरअन्दाज गर्ने, यता काठमाडौंमा चाहिँ भारतीय जासुससाग एकान्तमा दुई घण्टा वार्ता गर्ने ? कहाँ गयो नेपालको हैसियत ? उपसचिव, सहसचिवस्तरको जासुससँग नेपालका प्रधानमन्त्रीले दुई देशवीचको सम्बन्धका बारेमा वार्ता गर्ने ? त्यसो त आफ्नै सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साको बिरोध गर्ने भारतीय प्रधानसेनापति नरवणेलाई स्वागत गर्न यो सरकार तैयार भएर बसेको छ । स्पष्ट भन्नुपर्दा ओलीको भनाइ र गराइ एकदमै विपरित छ । एकथरि यसो पनि भन्छन्– अव आउने चुनावमा बिरक्तिएका जनतालाई आफूतिर आकर्षित गराउन र दुइ ृतिहाइ बहुमत ल्याउनक ालागि प्रम ओलीले नेपाली मतदातासामु हामीलाई दुइृ तिहाइ दिनुस् त्यसपछि यो खर्चिलो संघीयता खारेज गर्छौं, बहुसंख्यक नेपालीको भावनाअनुरुप हिन्दराष्ट्र कायम गर्छौं समेत भनेर झुक्याउन सकछन् । यिनको कुनै भर नै छैन । त्यसो त अव हुने चुनावमा यिनलाई मत माँग्ने कुनै गतिलो बहाना पनि छैन । त्यसैले यस्तै कुराहरु उठाएर पुनः जनतालाई बेबकुफ बनाउन सक्छन् । फेरि नेपाली झुक्किन पनि सक्छन् । ०४६ देखि ०६५ सालसम्म यिनै ओलीमार्काहरुले झुक्याएकै हुन् । हेरौं हाम्रो स्थिति । हिजो कहाँ थियौं, आज कहाँ पुग्यौं ?
भ्रष्टाचार गरेर जनता र देश डुबाउने यिनीहरु, यिनलाई नेता मानेर बस्नुपर्ने । कहिलेसम्म सहने यिनलाई ? पूर्वराजाले पटक पटक आफूलाई साथ दिए अभिभावकत्व लिन तैयाररहेको बताइरहनु भएको छ । यी सडेगलेका नेताहरुलाई रछ्यानमा मिल्काउन जनताले कुनै आइतवार कुर्नुपर्दैन । हिजो कानुनव्यवस्था थियो, दण्डहीनता कम थियो, जातीय विभेद थिएन, जब राजा संवैधानिक भए, तवदेखि नेपाल अराजक बन्दै अहिले त हुकुमी शासन चल्न थालेको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्रको शिर्षकमा मुलुकमा झूठतन्त्र, भ्रष्टाचारतन्त्र मौलाएको छ । अव नेपालमा संवैधानिक भन्दा पनि सक्रिय राजतन्त्रकै जरुरत देखिन्छ । लोकतन्त्र असफल र अफाप शिद्ध भइसक्यो ।
लोकतन्त्र नाम राम्रो, सञ्चालकहरु पाखण्ड बढी देखाउन थाले । यसकारण अफापशिद्ध भयो । पूर्वराजाले जनतातिर र जनताले पूर्वराजातिर कति हेरिरहने ? यस्ता नेताभन्दा मुलुक निर्माताका बंश हजारगुणा सही छ । यसकारण विजया दशमी २०७७ का अवसरमा हामी सबैलाई माता भवनानीसँग सद्बुद्धि दिउन्, यी राष्ट्रघाती नेताहरुले छोपेका आँखा खोल्ने क्षमता हामीमा बिकास होस् । अव पनि पूर्वराजाको सन्देश पढ्ने, एकछिन चर्चागर्ने र अनि बिर्सने कम नगरौं । व्यवहारमा उतार्नतिर लागौं, यसैमा नेपाल र नेपालीको कल्याण छ ।